नविन अग्रवालको नेतृत्वमा लायन्स क्लव अफ दमक गरिमाको उदय | Prabhavkari News
नविन अग्रवालको नेतृत्वमा लायन्स क्लव अफ दमक गरिमाको उदय
प्रभावकारी न्यूज सम्बाददाता १० महिना अगाडि
दमक/ पछिल्लो समयमा दमकमा लायन्स क्लवहरु खुल्ने क्रम जारी रहेको छ । लायन्स क्लव अफ इन्टरनेशन ३२५ वान अन्र्तगत दमकमा नयाँ क्लवको उदय भएको छ । सामाजिक काममा सक्रिय रहने उदेश्यका साथ लायन्स क्लव अफ दमक गरिमाको उदय भएको हो । यसको नेतृत्व दमकका युवा ब्यवसायी तथा दमक उद्योग बाणिज्य संघको कार्य समिति सदस्य समेत रहेका नविन अग्रवालले गरेकाछन् ।
क्लवमा सबै क्षेत्रका दमकका सफल युवा ब्यवसायीहरु रहेकाछन् । लायन्स क्लव अफ लखनपुरले क्लवलाई स्पोन्सर गरेको हो । क्लवको प्रथम उपाध्यक्षमा दिपेन्द्र ढुंगेल, द्वितिय उपाध्यक्षमा मुकुन्द आचार्य र तृतीय उपाध्यक्षमा रेवत बस्नेत रहेकाछन् ।
यसैगरी सचिवमा दिनेश सुवेदी, सह सचिवमा दिनेश अधिकारी, कोषाध्यक्ष बिसाल बिष्ट, सह कोषाध्यक्षमा महेश पोखरेलछन् । यसैगरी क्लव सल्लाहकारमा राजकुमार थापा, सदस्य सचिवमा लक्की सिटौला, क्लव डाइरेक्टरमा देबीप्रसाद कोइराला रहेकाछन् ।
यसैगरी बाबुराम ढुंगेल, पंकज अग्रवाल, प्रकाश गौतम, ओम पोखरेल, नारायण गौतम, अम्बिका प्रसाइ, प्रिति अग्रवाल, खेमप्रसाद न्यौपाने, राजकुमार गुप्ता, पुकार थापा, सञ्जित शाह, इन्द्रबहादुर बोहोरा, सुनिता बराल, रमा भट्टराई, नारायण पाठक,टिकादेबी सुबेदी लगायत सदस्यछन् ।
पहिलो पाईला नेपाल दमकको सर्वसम्मत अध्यक्षमा दीपक खड्का
लायन्सको मेरो डिस्ट्रिक(325 A1) लाई विश्वमा नम्बर वान बनाउन लाग्छु-रेवत कार्की, शतप्रशित एस भोट !
लायन्स क्लव अफ ईन्टरनेशन ३२५ का शिर्ष लिडरहरु दमकमा, रेवतबहादुर कार्कीको टिमलाई अग्रिम शुभकामना कार्यक्रम
दमक जेसिजको अर्को फड्को ! रेडियो कार्यक्रम जेसिज आवाज शुरु गर्ने सम्झौता